ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို မိတ်ဆွေများထံအပ်နှံခဲ့ရာမှ ပြန်တောင်းမရ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း – CHAR TAKE
ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို မိတ်ဆွေများထံအပ်နှံခဲ့ရာမှ ပြန်တောင်းမရ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ကို မိတ်ဆွေများထံ အပ်နှံခဲ့ရာမှ ပြန်တောင်းမရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်း
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို ၅၀၅ စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံ ရချိန်မှာတော့ မိဘတွေကို သင့်တော်ရာမှာ ရွေ့ပြောင်းပြီး သူ့အနုပညာ အလုပ်နဲ့ ရရှိထားတဲ့ ချွေးနည်းစာ လေးတွေကို ယုံကြည် ရတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့ မိတ်ရင်း ဆွေရင်းတွေထံမှာ ခေတ္တအပ်နှံပြီး ရှောင်တိမ်းနေခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အပ်နှံထားသူတွေထံမှာ ပြန်လည်တောင်းယူတဲ့ အချိန်မှာတော့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ကာ ပတ်ပြေးနေကြကြောင်း ဖြူဖြူကျော်သိန်းက အင်စတာဂရမ်မှာ ဖြစ်စဉ်ကို ရေးသားထား ပါတယ်။
” ရေနစ်သူ ဝါးကူထိုးကြရာဝယ် … ၅၀၅(က)နဲ့ အမှူဖွင့်ခံရလို့ မကျန်းမာတဲ့ မိအိုဖအိုကိုပစ်ပြီး ပုန်းရရှောင်ရ ၊ စိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြုံရ ၊ ဘာ အလုပ်မှမလုပ်ရလို့ ဝင်ငွေလုံးဝမရှိရတဲ့ထဲ … လူယုံသတ်ခံရတာ ခံရခက်ဆုံးပဲ🥺 ဒုက္ခရောက်ချိန်မို့ ကိုယ်တစ်သက်လုံး ရိုးရိုးသားသား ရှာထားခဲ့တဲ့ ချွေးနည်းစာလေးကို ယုံပြီးခဏ အပ်ထားခဲ့မိပါတယ် … ခုလိုလို့ ပြန်လည်းတောင်းရော ရူးချင်ယောင်ဆောင် ပတ်ပြေးကြရော!🙄
တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးနော် …၂ ယောက်တောင်!😳 ပထမ တစ်ယောက်ကတော့ သူ့အနေအထားအရ ဒီပိုက်ဆံကို မက်လို့ဆိုလည်းထားပါတော့ … နောက်ဆုံး ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုယ် ပြန်ရဖို့အရေး ရှေ့နေခပါ အကုန်ခံပြီးလ နဲ့ချီ သူခိုးဖမ်းသလို မိတ်ပျက်ခံလိုက်ဖမ်းမှ မတတ်သာတဲ့ အဆုံးပြန်ပေးလေရဲ့ ။ 😓
ခုတစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်ထက်လည်း ချမ်းသာ၊ အသိုင်းအဝိုင်း အမြင့်ကလည်းလာတာမို့ ဒီပိုက်ဆံ လောက်နဲ့တော့ နာမည်ပျက် မခံလောက်ဘူး ထင်ထားတာ … ခုတော့ amazing တင်မက jaw drop ပါဖြစ်နေ ရပြီ ! 😱 ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာသာ သိရင် ကိုယ့်လိုပဲ အားလုံးလည်း shock ရသွားကြမယ်ထင်ရဲ့ …😔 ဘဝတူ မောင်နှမတွေလည်း ခုလို အစစအရာရာ ခက်ခဲနေချိန်မှာ လူလိမ် လူကောက်တွေရဲ့ လူယုံသတ်ခံရခြင်း ကကင်းဝေးကြပါစေ 🙏 ” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ် အကောင့်မှာ မျှဝေ ထားပါတယ် ။ crd
Unicode … ရှောငျတိမျးနရေစဉျ ပိုငျဆိုငျမှုတခြို့ကို မိတျဆှမြေားထံ အပျနှံခဲ့ရာမှ ပွနျတောငျးမရဖွဈနတေဲ့အကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့ အဆိုတျော ဖွူဖွူကြျောသိနျး
ဖွူဖွူကြျောသိနျးကို ၅၀၅ စာရငျးမှာ ထညျ့သှငျးခံ ရခြိနျမှာတော့ မိဘတှကေို သငျ့တျောရာမှာ ရှပွေ့ောငျးပွီး သူ့အနုပညာ အလုပျနဲ့ ရရှိထားတဲ့ ခြှေးနညျးစာ လေးတှကေို ယုံကွညျ ရတယျလို့ ယူဆထားတဲ့ မိတျရငျး ဆှရေငျးတှထေံမှာ ခတ်ေတအပျနှံပွီး ရှောငျတိမျးနခေဲ့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျ အပျနှံထားသူတှထေံမှာ ပွနျလညျတောငျးယူတဲ့ အခြိနျမှာတော့ ရူးခငျြယောငျဆောငျကာ ပတျပွေးနကွေကွောငျး ဖွူဖွူကြျောသိနျးက အငျစတာဂရမျမှာ ဖွဈစဉျကို ရေးသားထား ပါတယျ။
” ရနေဈသူ ဝါးကူထိုးကွရာဝယျ … ၅၀၅(က)နဲ့ အမှူဖှငျ့ခံရလို့ မကနျြးမာတဲ့ မိအိုဖအိုကိုပဈပွီး ပုနျးရရှောငျရ ၊ စိတျဒုက်ခမြိုးစုံကွုံရ ၊ ဘာ အလုပျမှမလုပျရလို့ ဝငျငှလေုံးဝမရှိရတဲ့ထဲ … လူယုံသတျခံရတာ ခံရခကျဆုံးပဲ🥺 ဒုက်ခရောကျခြိနျမို့ ကိုယျတဈသကျလုံး ရိုးရိုးသားသား ရှာထားခဲ့တဲ့ ခြှေးနညျးစာလေးကို ယုံပွီးခဏ အပျထားခဲ့မိပါတယျ … ခုလိုလို့ ပွနျလညျးတောငျးရော ရူးခငျြယောငျဆောငျ ပတျပွေးကွရော!🙄
တဈယောကျမဟုတျဘူးနျော …၂ ယောကျတောငျ!😳 ပထမ တဈယောကျကတော့ သူ့အနအေထားအရ ဒီပိုကျဆံကို မကျလို့ဆိုလညျးထားပါတော့ … နောကျဆုံး ကိုယျ့ပိုကျဆံကိုယျ ပွနျရဖို့အရေး ရှနေ့ခေပါ အကုနျခံပွီးလ နဲ့ခြီ သူခိုးဖမျးသလို မိတျပကျြခံလိုကျဖမျးမှ မတတျသာတဲ့ အဆုံးပွနျပေးလရေဲ့ ။ 😓
ခုတဈယောကျကတော့ ကိုယျ့ထကျလညျး ခမျြးသာ၊ အသိုငျးအဝိုငျး အမွငျ့ကလညျးလာတာမို့ ဒီပိုကျဆံ လောကျနဲ့တော့ နာမညျပကျြ မခံလောကျဘူး ထငျထားတာ … ခုတော့ amazing တငျမက jaw drop ပါဖွဈနေ ရပွီ ! 😱 ဘယျသူတှလေဲ ဆိုတာသာ သိရငျ ကိုယျ့လိုပဲ အားလုံးလညျး shock ရသှားကွမယျထငျရဲ့ …😔 ဘဝတူ မောငျနှမတှလေညျး ခုလို အစစအရာရာ ခကျခဲနခြေိနျမှာ လူလိမျ လူကောကျတှရေဲ့ လူယုံသတျခံရခွငျး ကကငျးဝေးကွပါစေ 🙏 ” ဆိုပွီး သူမရဲ့ အငျစတာဂရမျ အကောငျ့မှာ မြှဝေ ထားပါတယျ ။ crd